Xukuumadda Somaliland Oo Mastaafurisay Nin Jarmal Ah Oo Ku Xidhnaa Mandheera | Somaliland.Org
February 25, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland ayaa maanta dalka ka mastaafurisay Gunter Bischoss, Jarmal ah oo ku xidhnaa xabsiga Mandheera ka dib markii lagu helay inuu faafiyay sawiro dhaqan xumo ah oo aanay diinta islaamka iyo dhaqanka suubanba ka soo horjeeda.
Maxkamada Gobolka Hargeysa ayaa hore ninkan ugu xukuntay 4 sanadood oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $10 kun oo Dollar. Sii daynta ninkan ayaa ka dambaysay ka dib markii Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu cafis u fidiyay ninkaasi oo sida la sheegay xaaladiisa caafimaad aad u liidatay xiligan isla markaana ay Wasaarada Arrimaha dibada iyo Safaarada Dalka Jarmalka ee Itoobiya, kuwaasi oo xukuumadda kala soo xidhiidhay xaalada ninkaasi.
Wasiirka Wasaarada Cadaalada Somaliland Prof. Ismaaciil Muumin Aar, ayaa xaqiijiyay mastaafurinta ninkan oo lagu sii daayay cafis madaxweyne. Sida aanu ka helay warar xog ogaal ah ninkan ayaa la sheegay inuu mudooyinkii u dambeeyay ka soomay cuntada isla markaana uu xanuunsaday.
Previous PostYaa yidhi Somaliland may Dhaqaaqin?Next Post“Accept the reality that a unified Somalia is not possible” Professor NIKOLAS GVO	Blog